Yini ukuhlangana okusemthethweni? | Law & More B.V.
Blog » Yini ukuhlangana okusemthethweni?
Yini ukuhlangana okusemthethweni?
Ukuthi ukuhlangana kwamasheya kufaka ukuhanjiswa kwamasheya ezinkampani ezihlanganayo kucacile egameni. Ukuhlanganiswa kwegama lempahla nakho kuyasho, ngoba izimpahla ezithile nezikweletu zenkampani zithathwa ngenye inkampani. Igama elithi ukuhlanganiswa kwezomthetho lisho ifomu lokulawulwa okusemthethweni kuphela eNetherlands. Kodwa-ke, kunzima ukuqonda ukuthi lokhu kuhlanganisani kuhlanganisani uma ungazazi izinhlinzeko zomthetho. Kule ndatshana, sichaza le mithetho yokuhlanganiswa kwezomthetho ukuze ujwayelane nenqubo nemiphumela yakhona.
Ukuhlanganiswa kwezomthetho kwehlukaniswa iqiniso lokuthi akudluliswa kuphela amasheya noma izimpahla nezikweletu, kepha yonke imali. Kukhona inkampani etholayo nenkampani eyodwa noma eziningi ezinyamalalayo. Ngemuva kokuhlanganiswa, izimpahla nezikweletu ze-c ezinyamalalayo inkampani iyeka ukuba khona. Abaninimasheya benkampani eyanyamalalayo baba ngabaninimasheya enkampanini etholayo ngokusebenza komthetho.
Ngoba ukuhlangana kwezomthetho kubangela ukudluliswa ngesihloko somhlaba wonke, zonke izimpahla, amalungelo nezibopho zidluliselwa enkampanini etholayo ngokusebenza komthetho ngaphandle kokudinga ukuthengiselana okwehlukile. Lokhu ngokuvamile kubandakanya izinkontileka ezifana nokuqasha nokuqashisa, izivumelwano zokuqashwa nezimvume. Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi ezinye izinkontileka ziqukethe okuhlukile kokudluliswa ngesihloko somhlaba jikelele. Ngakho-ke kuyalulekwa ukuhlola imiphumela nemiphumela yokuhlangana okuhlosiwe ngenkontileka ngayinye. Ngeminye imininingwane ngemiphumela yokuhlangana kwabasebenzi, sicela ubheke indatshana yethu ku- ukudluliswa kokuzibophezela.
Yimaphi amafomu wezomthetho angahlangana ngokusemthethweni?
Ngokomthetho, abantu ababili noma ngaphezulu bezomthetho bangaqhubeka nokuhlangana okusemthethweni. Lezi zinhlangano ezisemthethweni zivame ukuba izinkampani ezizimele noma ezilinganiselwe zomphakathi, kepha izisekelo nezinhlangano nazo zingahlangana. Kubalulekile-ke ukuthi izinkampani zibe nefomu lezomthetho elifanayo uma ezinye izinkampani zibandakanyeka kune-BV neNV. Ngamanye amagama, i-BV A ne-NV B ingahlangana ngokusemthethweni. I-Foundation C ne-BV D zingahlangana kuphela uma zinefomu lezomthetho elifanayo (isibonelo, i-Foundation C ne-Foundation D). Ngakho-ke, kungahle kudingeke ukuthi ushintshe ifomu lezomthetho ngaphambi kokuhlangana.
Ngakho-ke, lapho kunezinhlobo ezimbili zomthetho ezifanayo (noma ama-NVs nama-BV kuphela), angahlangana ngokusemthethweni. Le nqubo isebenza kanjena:
Isiphakamiso sokuhlanganisa - inqubo iqala ngesiphakamiso sokuhlanganiswa esenziwe ibhodi labaphathi lenkampani esizohlanganiswa. Lesi siphakamiso bese sisayinwa yibo bonke abaqondisi. Uma isiginesha ilahlekile, isizathu salokhu kufanele sisho.
Inothi echazayo - ngemuva kwalokho, amabhodi kufanele alungiselele inothi echazayo ngalesi siphakamiso sokuhlangana, esichaza imiphumela elindelekile yezomthetho, ezenhlalo nezomnotho ngokuhlangana.
Ukugcwaliswa nokumenyezelwa - isiphakamiso kufanele sifakwe kwiChamber of Commerce, kanye nama-akhawunti amathathu akamuva kakhulu wonyaka. Ngaphezu kwalokho, ukuhlangana okuhlosiwe kufanele kumenyezelwe ephephandabeni likazwelonke.
Ukuphikiswa kwababolekisi - ngemuva kokumenyezelwa kokuhlanganiswa, ababolekisi banenyanga eyodwa yokuphikisana nokuhlangana okuhlongozwayo.
Ukuvunywa kokuhlanganiswa - inyanga eyodwa ngemuva kokumenyezelwa, kukomhlangano jikelele ukuthatha isinqumo sokuhlangana.
Ukuqaphela ukuhlangana - ezinyangeni eziyisithupha zesimemezelo, ukuhlangana kufanele kutholakale ngokudlula itayitela lesivumelwano. Ezinsukwini eziyisishiyagalombili ezilandelayo, ukuhlangana okusemthethweni kufanele kube kubhaliswe kwirejista yezohwebo weChamber of Commerce.
Yiziphi izinzuzo nezinkinga?
Yize kunenqubo esemthethweni yokuhlangana okusemthethweni, inzuzo enkulu ukuthi iyindlela elula yokwakha kabusha. Imali yonke idluliselwa enkampanini etholayo futhi izinkampani ezisele ziyanyamalala. Kungakho le ndlela yokuhlangana isetshenziswa kaningi ngaphakathi kwamaqembu ezinkampani. Ukudluliswa ngaphansi kwesihloko jikelele kuyinto engeyinhle uma umuntu efuna ukusebenzisa amathuba okuthi "ukukhethwa kwamacherry". Hhayi izinzuzo zenkampani kuphela, kepha nemithwalo izodluliswa ngesikhathi sokuhlangana okusemthethweni. Lokhu kungafaka nezikweletu ezingaziwa. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi ubheke ngokucophelela ukuthi yiluphi uhlobo lokuhlangana oluhambisana kahle naleyo onayo engqondweni.
Njengoba ufundile, ukuhlangana okusemthethweni, ngokungafani nokwabelana noma ukuhlangana kwenkampani, kuyinqubo elawulwa ngokomthetho lapho ukuhlangana okuphelele kwezinkampani kwenzeka lapho zonke izimpahla nezikweletu zidluliswa ngokusebenza komthetho. Ngabe awuqiniseki ukuthi le ndlela yokuhlangana iyiyona efanele inkampani yakho? Ngemuva kwalokho sicela uxhumane Law & More. Abameli bethu bakhethekile ekuhlanganisweni nasekutholakaleni futhi bazokujabulela ukukweluleka ngokuthi yikuphi ukuhlangana okulungele inkampani yakho, iyini imiphumela yenkampani yakho nokuthi yiziphi izinyathelo okudingeka uzithathe.
Thumela Previous Isehlukaniso nezingane: ukuxhumana kuyisihluthulelo
Post Next Konke mayelana nelungiselelo lokuzuza